ओलीलाई देउवाको प्रश्न- आफू कार्यकारी प्रधानमन्त्री, दोष अरुलाई दिने ? (भिडियो) – Nepal Press
ओलीलाई देउवाको प्रश्न- आफू कार्यकारी प्रधानमन्त्री, दोष अरुलाई दिने ? (भिडियो)
२०७८ वैशाख २७ गते १४:४८
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आफू कार्यकारी प्रधानमन्त्री भएर अरुलाई दोष नथोपर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसंग आग्रह गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिदैं प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता समेत रहेका देउवाले प्रधानमन्त्री ओलीकै कारण आजको अवस्था आइपरेको बताए ।
‘आफू कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुने अनि अरुमाथि दोष थोपर्ने ? अरुमाथि गुनासो र दोष थोपरेर जिम्मेवारीबाट प्रधानमन्त्री भाग्न पाउनुहुन्छ ?’, देउवाको प्रश्न थियो ।
‘३ वर्षअघि एमाले र माओवादी मिलेर गठबन्धन गरेर झण्डै दुई तिहाई बहुमत ल्याएर प्रधानमन्त्रीजीले सरकार बनाउनुभएको छ । आज उहाँ विश्वासको मत माग्नुपर्ने अवस्थामा पुग्नुभएको छ । यसका लागि उहाँ नै जिम्मेवार हुनुहुन्छ’, देउवाले भने । आफ्नो असफलताको दोष अरुलाई थोपर्ने गरेको भन्दै देउवाले प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकार पूर्ण रुपले असफल भएको बताए ।
सभापति देउवाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई आत्मसमिक्षा गर्न सुझाव पनि दिए । ‘मानिस दुनियाँबाट भाग्न सक्छ , आफैबाट भाग्छ सक्दैन । एकपटक छातीमा हात राखेर भन्नुस्, आफैले आफैले सोध्नुस् । यो अवस्था तपाईको व्यक्तिगत दम्भ, राजनीतिक र प्रशासनिक कुशासनका कारण आएको होइन रु’ देउवाले सोधे ।
देउवाले कोभिड महामारी समेत कमिसन र भ्रष्टाचारमा सरकार लिप्त भएको भन्दै यस्तो अक्षम्य अपराधको जनताले जवाफ दिने बताए । प्रधानमन्त्री ओलीको वक्तव्य आत्मरति र आत्मप्रशंसामा केन्द्रीत रहेको भन्दै देउवाले सरकारका असफलताको इतिहासले मूल्यांकन गर्ने बताए ।
प्रकाशित: २०७८ वैशाख २७ गते १४:४८
देशका मध्य क्षेत्रमा भारी वर्षाको सम्भावना